WARBIXIN MUHIIM AH: Ruush oo doonaya in uu saldhig Milateri ka sameysto Xeebaha Soomaaliya, Mareykanka & Shiinaha oo iyana qalab aruursanaya, Dawladdii Soomaaliyeedse aaway? – Puntlandtimes
WARBIXIN MUHIIM AH: Ruush oo doonaya in uu saldhig Milateri ka sameysto Xeebaha Soomaaliya, Mareykanka & Shiinaha oo iyana qalab aruursanaya, Dawladdii Soomaaliyeedse aaway?
NAIROBI(P-TIMES)- Dunida ayaa gashay dagaalkii Qaboobaa markale, taasi waxaa calaamad wanaagsan u ah sidda ay wadamada waa weyn ee leh hubka halista ah ugu diyaar garoobeen in ay kala qabsadaan meelaha muhiimka u ah danahooda, gaar ahaana tartanka ugu adag ayaa loogu jiraa mandiqada Geeska Africa
Jaro-ciyaareedka Soomaalida wax u e’eg ayay ciyaarayaan wadamada Ruush, Mareykan & Shiinaha, waxayna qolo kasta colaadinaysaa qolada kale, taas oo ka dhigan fariimo siyaasadeed iyo bar bilowga dagaalkii Qaboobaa ee dunida oo markale dib u soo laabta.
Soomaaliya ayaa kamid ah meelaha sidda adag ay dhinacyadu ugu loolamayaan, gaar ahaana sadexda Quwadood ee Mareykanka, Shiinaha & Ruushka,inkastoo aysan mandiqadaas qaadi Karin loolanka xooga badan una diyaarsaneyn, haddana wadan kasta wuuxu wajahayaan danihiisa siyaasadeed ee gaarka ah.
Khariidada muujinaysa Hardanka gobalka Geeska Africa ee u dhaxeeya Ruushka, US & CHINA
Jabuuti oo deris la ah Soomaaliya waxaa kuyaala Saldhigyada ciidamada Shiinaha & Mareykanka, laakiin Ruushku wuxuu hadda wada hadal kula jiraa Somaliland oo qeyb ka ah Soomaaliya, wuxuuna doonayaa in uu Saldhig ciidan ka hela deegaanka SAYLAC oo aad ugu dhaw xadka dalka Jabuti uu la wadaago Soomaaliya, in uu helo saldhigan gorgortan xoog badan ayaa ka socda daaha-gadaashiisa.
Wasiirka ARrimaha dibadda SL Dr Sacad Ali Shire iyo Yury Kourchakov oo ah diblumaasi Russia ah
Labo goor ayey Nairobi isku arkeen Diblumaasi sare oo kasocday Ruushka laguna magacaabao Yury Kourchakov iyo Wasiirka Arrimaha dibada ee Somaliland Sacad Cali Shire, inkastoo aan laheynin faahfaahin buuxda, haddana warka ayaa banaanka u soo baxay.
Xog lagu baahiyey baraha wararka ee Internetka ayaa lagu sheegay in ay Ruushku ay raadinayaan Saylac, laakiin waxay ku bedelayaan ay yihiin wax ay og yihiin, Somalilandse waxay doonaysaa Aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho Ruushka, taasina waa arrin ku adag Moscow, in ay ku dhawaaqdo xili wadamada jaarka la ah Soomaaliya aysan talaabadaasi qaadi Karin.
Somaliland oo qeyb ka ah Soomaaliya, sharci ahaana la durayo in ay heshiis noocan ah la gali karto dawlad caalami ah, ayaa hadda ku jirta loolan ku aadan sidii ay Ruushka u soo dhaweysan lahayd, laakiin laftirkeedu caqabadaha waa weyn ee haysta waxaa kamid ah in ay u baahan tahay saxiixa dawladda Faderaalka ee caalamku aqoonsan yahay.
Saldhig milateri ayay hadda Somaliland Berbera ka siisay Imaaraatka Carabta, oo la rumeysan yahay in ay gadaal ka riixayso dawladda Mareykanka, waxaana saldhigaas ciidan ay kubedelatay Somaliland in ay hesho wadooyin iyo mashaariic waa weyn oo dhanka shaqo abuurka ah, inkastoo aysan jirin ilaa hadda sharciyad dhameystiran oo heshiiskan ay siisay dawladda Faderaalka.
Dawladda Soomaaliya uma muuqato mid fahamsan meesha uu dalkan kuyaalo iyo sidda ay muhiimka u tahay in laysku maalo dawladdaha ku tartamaya sidii ay u so dhaweysan lahaayeen Soomaaliya, taas oo ka dhigan fursado muhiim ah oo gacanta kasii baxaya.
Moscow waxay dhawaan muujisay qeylo-dhaan aan looga baran oo ku wajahan Soomaaliya, Wasiirkeeda Arrimaha dibadu wuxuu si cad u sheegay in 40 sanno ka dib markii ay burburiyeen ciidamadii Xooga dalka Soomaaliyeed ay tahay in hadda la dhiso, taasi waxay noqonaysaa fariin kale oo Soomaalida uga timid Moscow si ay uga faa’iideystaan.
Ra’iisulwasaarihii hore ee Soomaaliya haddana ah Xildhibaan Aqalka Sare ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa tagey Moscow wuxuuna la kulmay wasiirka Arrimaha dibada ee dalkaas, dhamaadkii 2016-kii, waxyaabaha ugu weyn ee ay codsatay Muqdisho waxay ahayd dibu dhiska ciidan xoog badan oo amniga kala wareega AMISOM, laakiin dalabkaas markiiba si deg deg ah Itoobiya ayaa uga daba-tagtay.
EX RW Sharmaake & Wasiirka Arrimaha dibadda Ruushka
Madaxweyne Putin waxay u noqonaysaa saldhigii ciidan ee ugu horeeyey ee Africa uu ku yeesho dalkiisu, xili uu dhawaan si rasmi ah ugu dhawaaqay qorshaha isbalaarinta iyo dibu dhiska quwada Ruushka, waxaana uu sheegay in ay gaari doonaan meelo cusub oo muhiim u ah qarankiisa.
Madaxweyne Trump wuxuu mar kale bishan April saxiixay qaraar mudo dheeraad ah ku daraya in Soomaaliya ay tahay dal Argagixiso oo fashilmay, ayna tahay in ay kasii howlgalaan ciidamadiisu, iyagoo awood u leh in ay saacad kasta garaacaan meeshii ay ku tuhmaan Xoogaga Argagixiso.
Shiinuhu wuxuu u ordayaa in uu muujiyo saameyntiisa, wuxuuna door weyn ka ciyaarayaa dibu dhiska kaabayaasha dhaqaalaha, si uu utuso Soomaalida in ay waxoodu yihiin dibu dhis balaaran, waana waxay xiligan u baahan tahay Soomaalida oo burburisay dalkooda 28 sanno ka hor, markii ay rideen dawlad awood badan.
Labo wafdi oo kasocday Xukuumada Shiinuhu waxaa lagu arkay dhul xeebeedka bartamaha Soomaaliya, gaar ahaana Garacad, Eyl & Hobyo oo sadexduba hadda doonaya in ay helaan Dekedo, laakiin caqabado waa weyn ayaa haysta, lamana garanayo waxa rasmiga ah ee ay Shiinuhu kala soo kulmeen deegaanadaas.
Wafdi ka socda Shiinaha oo tagay Garacad, Hobyo & Eyl oo ay samhin dekedood ka wadeen
Naqshadda Garoonka Diyaradaha ee magaalada Gaalkacyo, Somalia oo ay gacanta ku hayso shirkadda China ee CCECC
Shirkado laga leeyahay Shiinaha ayaa hadda qaatay Qandaraaska dhismaha wadooyin iyo garoomo kuyaala deegaanada Waqooyi Bari ee Soomaaliya (Puntland), laakiin ma cadda ilaa hadda joogitaankoodu in uu qeyb ka yahay arrimo waa weyn oo la xariira
Dawladda Faderaalka Soomaaliya lama garanayo talaabada ay qaadi doonto iyo sidda ay uga faa’iideysan doonto isheysiga iyo loolanka dalkeeda loogu jirro, xili si adag ay isku hayaan wadamada Carbeed qaarkood oo hadda saameyn ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Ma muuqato rajo wanaagsan oo ay dawladda Faderaalku ku maarayso howlaha horyaala, waxaana dawladda oo si buuxda u maamusha Muqdisho ay ka dhigatay saaxiibkeeda koowaad Turkiga oo siiya lacag dheeraad ah, laakiin ilaa hadda majirto wax dhaqdhaqaaq diblumaasiyaded ah oo ay dawladdu ugu baraarugsan tahay waxa kasocda gudaha dalkeeda.
Ninka faladan Qoray wax dhadhan ah oo ukuqoray somaliya & siiyasadeda ama waxii la somaray,waxasi waxba kordhimayan,manta somaliya waxay ubahantahay Dawlad xoog leh oo barbar istagta oo dhibatada haysa laqaybsata,waxay tarahayan majirto Dawladaha somaliya $2000,oo Dolar kuwas oo dhahaya wa tagero,waxas ma’ah tagero wa silxin,waxad ogtihin in wadamada Aduunku somaliya & ururka Allshabab isku hubeynayan oo aay ku heshiyen,Qar Allshabab takuleya & Qar takuleya D,f somaliya,taas oo aad arkeyso isku jabin ummaded,mesha somaliya ka tilabsan weyday wa meshas,Qof somaliya oo arintasi umuqato majiro xata kuwa talada wadanka gacantoda ku mamula,somaliya waxa haysta dhibato aan waliged dhamanan.
Dowlada Somaliland waxay heshiis buuxa LA galaysaa dowladii ay doonto iyadoo ka faaidaysanaysa dowladahan had a maslaxadaha kaleh anaga waxaan noo darran aqoonsi
Aqoonsigana waxaa u galaynaa meeshu Ku jirro sida Israel oo cadaawad naga dhaxaysa. Somalia darteed aan ULA galayno heshees military hada …..burburka iyo baaba,a aan LA damacsanhy somalia bal aan iSla arragno barrtuu Ku danbeeyo….aakhirro ayaan iskula dhaadhacaynaa Somalia ilayn waa na amaan bal n waayeene….dawladahaa imaka danohooda ka leh dhulkayaga ayaan ka faaidaysa doonaa inshaa alaah si aan cadaawada xun ee ay noo tuseen aan anaguna u tusno Somali waa cadogeena 1aad l…….Ethiopia iyo cadowga somaliduna waaaa saaxiibka yaga 1aad